China H20 Timber Beam kwilebhu formwork mveliso kunye nabathengisi | Lianggong
Itheyibhile formwork luhlobo lwefomwork esetyenziselwa ukugalelwa komgangatho, esetyenziswa ngokubanzi kwisakhiwo esiphakamileyo, isakhiwo esikwinqanaba elininzi, isakhiwo esingaphantsi komhlaba njl.
Itheyibhile formwork luhlobo lwefomwork eyayisetyenziselwa ukugalelwa komgangatho, isetyenziswa ngokubanzi kwisakhiwo esiphakamileyo, isakhiwo esinezinga eliphantsi lomzi-mveliso, isakhiwo esingaphantsi komhlaba njlnjl. Ngexesha lokwakha, emva kokugqitywa kokugalelwa, iiseti zeefomati zetafile zinokuphakanyiswa ngokuphakamisa ifolokhwe ukuya inqanaba eliphezulu kwaye iphinde isetyenziswe, ngaphandle kwesidingo sokuqhaqha. Xa kuthelekiswa nefomwork yesiko, ibonakaliswa sisakhiwo sayo esilula, ukuqaqa ngokulula, kwaye iphinde isebenze. Iphelisile indlela yesiko yenkqubo yenkxaso yesilayidi, equka ii-cuplocks, imibhobho ye-eel kunye neeplanga zemithi. Ulwakhiwo lukhawuleza ngokucacileyo, kwaye amandla abantu agciniwe kakhulu.
Iyunithi esemgangathweni yefom form
Itheyibhile formwork yeyunithi esemgangathweni ineesayizi ezimbini: 2.44 × 4.88m kunye no-3.3 × 5m .Umzobo wesakhiwo zezi zilandelayo:
Inkqubo yeefom yetheyibhile
Inkqubo ye-form-table yefomwork yifomwork yesaladi egalelwa kwisicwangciso somgangatho esimbaxa, indawo emxinwa. Ixhaswa ziipropu zensimbi okanye ii-tripods ezineentloko ezahlukeneyo zokuxhasa, kunye ne-H20 yeplanga umqadi njengeebhloko zokuqala nezesekondari, ezigutyungelwe ngeepaneli. Inkqubo inokusetyenziselwa ukuphakama okucacileyo ukuya kuthi ga kwi-5.90m.
Eyona ndlela ilula kakhulu kunye neFlex-table Formwork System yazo zonke iintlobo zamatye, aqukethe iipropu zensimbi, i-tripod, intloko eneendlela ezine, i-H20 boram yeplanga kunye nepaneli yokuvala.
Isetyenziselwa ubukhulu becala imimandla ejikeleze imingxunya yokuphakamisa kunye namatyala ezinyuko, kunye neeprojekhthi zelali okanye inkqubo yokuphatha ifreyim enesandla esilinganiselweyo.
Le nkqubo i-crane ezimeleyo ngokupheleleyo.
Imiqadi yeenkuni eyi-H20 ngenxa yokuphathwa kwayo ngokulula, ubunzima bayo obuphantsi kunye namanani agqwesileyo ngokwamanani ibham yomgangatho ophezulu wokudibanisa kunye nomqadi okhuselweyo ophela ngeplastikhi bumper iqinisekisa ixesha elide lobomi.
Le nkqubo isakhiwo elula, disassembly efanelekileyo kunye nendibano, ubhetyebhetye amalungiselelo kunye reusability.
Egqithileyo Umbhobho wetroli yombhobho
Okulandelayo: I-H20 yomthi weBall Wall Formwork